China LA Oxytetracycline jekiseni 20% Kugadzira uye Fekitori | Veyong
Chitarisiko: The mhinduro Inofanira kuve yero kune yakajeka brown yakajeka mvura.
1 ml ye LA Oxytetracycline jekiseni 20% ine Oxytetracycline dihydrate yakaenzana ne200 mg base.
Iko kushandiswa kwetetracycline kunoratidzwa mune systemic uye zvemuno hutachiona senge Bronchopneumon ia, bhakitiriya enteritis, urinary turakiti hutachiona, cholang itis, Metrit1s, mastitis, pyodermia, Anthrax, Diphtheria uye CRD.
Zviratidzo zvakanangana nemakwai, Mbudzi & Mombe ndezvekutapukisa, mastitis, metrit1s, chlamyd iosis, uye hutachiona hwecnea, conjunctiva uye wchirwere chehutachiona
Zviratidzo zvakanangana nehuku ndezvechirwere chisingaperi chekufema (CRD) Colibacillosis uye shiri yekorera
Chipimo chemushonga Uye AdministrationDosage & use
Iyo yakawanda dosi ndeye: 10-20mg / kg uremu hwemuviri, zuva nezuva. Mukuru: 0.5ml / 10kg, mhuka diki 1ml / 10kg huremu hwemuviri Mombe, ngamera, hwai, mbudzi: jekiseni rimwechete pachiyero che 20 mg oxytetracycline pa kg yehuremu hwemuviri kana 1 ml pa10 kg yemuviri
Dzokorora jekiseni rechipiri mushure memazuva 2-4
Acute mhedzisiro nekuda kwekushandiswa kwetetracycline hazviwanzo kucherechedzwa
Migumisiro yakaipa nekuda kwekushandiswa kwetetracycline ndeiyi: allergic reaction, photosensitivity, kushanduka kwemazino pazera rezera rechidiki uye hepatoxicity, oxytetracycline inogona zvakare kukonzera kutsamwiswa kwetishu panzvimbo yejchisarudzo
Anopesana-anoratidza ekushandisa tetracycline ndiko kwakakomba chiropa kana itsvo kukuvara uye dzimwe nguva hypersensitivity kune tetracycline
Therapeutic incom patriers
Tetracycline haifanire kusanganiswa nemabhakitiriya ekuuraya mabhakitiriya akadai sepenicill1nes, cephalosporins. Iko kunwiwa kwetetracycline ndikoinhibited painopihwa zvinowirirana negadziriro ine divalent cations. Mubatanidzwa we tetracycline nema macrolides akadai tylosin uye polymyxins akadai colistin, anoshanda synergistically
Yakayambira nguva yekubvisa
Kudya: mazuva makumi maviri nerimwe
Mukaka, Mazai: mazuva makumi manomwe
Chengetedza pazasi pe25 ℃, chengetedza kubva pachiedza. Chengeta pasingaonekwi nevana. Usashandise kana mhinduro ikava isina kugadzikana kana yakasviba. Nguva dzose bvunza veterinarian wako usati washandisa mushonga
Pashure: Gentamyclin sulphate jekiseni 4%
Zvadaro: Oxytetracycline Jekiseni 5%